China RXY Series Wash-Sterilize-Zadza-Chisimbiso Line Mugadziri uye Mutengesi | Shinva
Vial tsananguro: 1ml-100ml
Kubuda kwehuwandu: 10-500 ndiro / miniti
Kuzadza kururamisa: ≤ ± 1%
Ultrasonic kusuka + Mvura-Mhepo inochinjanisa kusuka
Mhando yezvinhu zvepakati: SIEMENS, GEMU, FESTO, ABB, Schneider, nezvimwe.
Main Performance Hunhu
* Vial Wash-Dry-Zadza-Seal Kugadzira Line inoshandiswa kugeza, sterilization, kuzadza nekuisa chisimbiso kweiyo diki vhoriyamu vhiri jekiseni mumusangano. Iyo inoratidzira yemhando dhizaini, inonzwisisika dhizaini, yakakwira degree of otomatiki, yakatsiga uye yakavimbika mashandiro, yakakwira kugadzirwa kushanda uye mehendi uye magetsi kusangana. Izvo zvikamu zvinosangana nemushonga wemvura zvinogadzirwa neAISI316L uye imwe yacho inogadzirwa neAISI304. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa hazvina kusvibiswa pane zvinodhaka uye nharaunda. Iyo yakazara dhizaini uye kugadzira zvinoenderana neDFA uye iyo nyowani GMP.
* Vial Wash-Dry-Zadza-Chisimbiso-Production Line inoumbwa Vertical Ultrasonic Washing Machine, Kuomesa uye Sterilization hovhoni, uye Vial Zadza-Seal Machine. Iyo inoratidzira kudyidzana kwekudyidzana, isina nhanho kumhanya mirau uye chaiyo kutonga uye inogona kusangana yekugadzira maitiro maitiro.
* Inoratidzira yakakwira kugadzirwa kumhanya, yakakwira qualification chiyero, hapana chinokanganisa, hapana chakaipa chiito, hapana kusvina uye pane zvakaputsika magaba.
* Iyo yakagadzirirwa nemhando dzakasiyana dzekuchengetedza chengetedzo kuti ive nechokwadi chekuchengetedza kweanoshanda uye muchina.
* Kugonesa madoko akachengetedzwa pazvikamu zvikuru.
* Iyo inoratidzira PLC kutonga, kubata screen oparesheni uye kugadzirirwa kugadzirwa.
* Buffer zvishandiso zvakaiswa pane yekubatanidza poindi pakati pezvikamu zvitatu zveyekugadzira mutsara, nekudaro inokwanisa kuve nechokwadi chakavimbika uye chakatsiga mashandiro.
* Ine basa rekuti hapana bhodhoro risina kuzadza.
* Iyo ine centralized ovha inopa system iyo inogona nyore kuwedzera mafuta pane lubrication nzvimbo.
Pashure: Zvoga tireyi Anotakura Ultrasonic Washers
Zvadaro: XH507 Dental Unit
LM Series Yakaomeswa Dryer
GV Series Yekushandisa system